Chọpụta nke nwanyị dere ya bipụtara n'afọ a mụrụ gị | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Na obodo anyi, ya mere, n'ubochi anyi rue ubochi a gha aghaghi inwe oghere maka nwanyi. N'ihi gịnị? Ọ bụ maka na o nweghị ezigbo aha nhata ka ụmụ nwoke. Ọ bụ maka nke a, ma n'ihi na ọtụtụ afọ ụmụ nwanyị jiri aha nzuzo iji bipụta ọrụ ha, na taa anyị ewetara gị edemede naanị na-eche maka ha, gbasara ụmụ nwanyị na-ede akwụkwọ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe nwaanyị dere bipụtara n'afọ a mụrụ gịMa ọ bụ, ịkwesịrị ịnọgide na-agụ isiokwu a ma chọọ afọ ahụ ị hụrụ ọkụ maka oge mbụ. A ga-enwe aha onye edemede a ma ama nke bipụtara n’afọ ahụ na akwụkwọ ahụ ọ wepụtara. M ugbua anya m: 1984, Angela Carter na «N'abalị na circus ».
Afọ, edemede na mbipụta
2017. Sabina Urraca nwere "Wonmụ agbọghọ ndị ahụ magburu onwe ha."
2016. Han Kang nwere "Onye anaghị eri anụ."
2015. Lucia Berlin na "Akwụkwọ ntuziaka maka ndị na-ehicha ihe."
2014. Siri Huvstedt na "Dawa na-egbu maramara."
2013. Chimamanda Ngozi Adichie with Amerịka.
2012. Zadie Smith na "NW London".
2011. Elena Ferrante na "Ezigbo enyi."
2010. Herta Müller na Taa, m ga - ahọrọ ịghara ịchọta onwe m.
2009. Hilary Mantel na "N'ogige nke anụ ọhịa wolf".
2008. Rosa Montero na "Ntuziaka ịzọpụta ụwa."
2007. Miranda July na «Onweghi onye si n’ebe a karia gị.
2006. Alison Bedchel na «Ulo obi uto: ezinyere ojoo ”.
2005. Anna Starobinets nwere «Oge siri ike ».
2004. Betlehem Gopegui na «Akụkụ oyi nke ohiri isi.
2003. Jhumpa Lahiri na "Aha ọma."
2002. Chatọ Chacón na «Olu ụra ».
2001. Rebecca Solnit na «Wanderlust ».
2000. Marjane Satrapi nwere «Persepolis ».
1999. Amélie Nothomb nwere «Stupor na ịma jijiji ».
1998. Lorrie Moore nwere «Nnụnụ America ».
1997. Svetlana Aleksievich nwere «Olu sitere na Chernobyl ».
1996. Helen Field na "The diaryof Bridget Jones".
1995. Lydia Davis na "Njedebe nke akụkọ".
1994. Alice Munro na «Mepee nzuzo ».
1993. Annie Proulx na "Ijikọ ntụpọ."
1992. Connie Willis na «Akwụkwọ nke ụbọchị ikpe ikpe ikpeazụ ».
1991. Isabel Allende dị ndụ «Atụmatụ na-enweghị ngwụcha.
1990. D B KA Byatt «Inwe ".
1989. Amy Tan na «Klọb nke kpakpando ọma ».
1988. Doris Lessing na «Nwa nwoke nke ise ».
1987. Toni Morrison na «Ndị m hụrụ n'anya.
1986. Ágota Kristosom mu «Akwụkwọ ndetu ukwu ».
1985. Margaret Atwood nwere «Akụkọ banyere nwa odibo ».
1984. Angela Carter na «N'abalị na circus ».
1983. Elfriede Jelinek nwere «Onye pianist ".
1982. Anne Tyler nwere «Nzukọ na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ».
1981. Carme Riera nwere «Mmiri mmiri maka Domenico Guarini ».
1980. Audre Lorde na "Akwụkwọ Ọrịa Cancer".
1979. Nadine Gordimer na Nwa Burger.
1978. Fran Lebowitz na "Ndụ obodo ukwu".
1977. Ama Ata Aidoo, jiri «Nwanyi anyi jiri nwayo nwanyi.
1976. Christa Wolf, ya na «Ihe ngosi umuaka ».
1975. Gloria Fuertes nwere «Ọrụ ezughị ezu ».
1974. Elsa Morante, na «Akụkọ ihe mere eme ".
1973. Iris Murdoch, ya naNwa onye isi.
1972. Eudora Welty na Nwa nwanyi onye nchekwube. "
1971. Elena Poniatowska na «Abalị nke Tlatelolco».
1970. Joan Didion na «Ka egwuregwu ahụ na-abịa.
1969. Maya Angelou ya na "Amaara m ihe kpatara nnụnụ ahụ ji gụọ egwu."
1968. Ursula K. Le Guin na "Ọkachamara si Earthsea."
1967. Joyce Carol Oates na "A ubi nke ụwa ụtọ"
1966. Jean Rhys na "Nnukwu Osimiri Sargasso".
1965. Flannery O'Connor na "Ihe ọ bụla rịgoro agbakọtala."
1964. Edna O'Brien na Girlsmụ agbọghọ lụrụ di na nwunye.
1963. Elena Garro na "Ihe ncheta nke ọdịnihu"
1962. Mercé Rodoreda nwere "The square nke diamond."
1961. Natalia Ginzburg na "Okwu abalị".
1960. Harper Lee nwere "Gbuo abalị abalị."
1959. Ana María Matute nwere «Ebe nchekwa mbụ ».
1958. Muriel Spark na Memento Mori.
1957. Carmen Martín Gaite nwere «N'etiti ákwà mgbochi ».
1956. Alejandra Pizarnik na "Ikpe ikpeazụ dị ọcha."
1955. Maria Zambrano na "Nwoke na chi".
1954. Simone de Beauvoir nwere «Ndị mandarins».
1953. Barbara Pym na "Jane na Prudence."
1952. Wisława Szymborska na "Ọ bụ ya mere anyị ji dịrị ndụ."
1951. Marguerite Yourcenar na "Ncheta nke Adriano".
1950. Patricia Highsmith na Ndị bịara abịa n'ụgbọ okporo ígwè.
1949. Shirley Jackson nwere "The lọtrị na akụkọ ndị ọzọ."
1948. Silvina Ocampo na "Autobiography nke Irene".
1947. Nelly Sachs na "N'ebe obibi nke ọnwụ."
1946. Kate O'Brien nwere Nwanyị ahụ.
1945. Rosa Chacel na "Ikike icheta nke Leticia Valle".
1944. Carmen Laforet nwere "Ọ dịghị ihe".
1943. Clarice Lispector na "Nso n'obi anụ ọhịa."
1942. María Teresa León na Ga-anwụ tere aka.
1941. Ivy Compton-Burnett na "Ndị nna na ụmụ nwoke".
1940. Carson McCullers na "Obi bu onye dinta owu na - ama."
1939. Agatha Christie, na "Obere oji ojii."
1938. Gabriela Mistral, nwere «Tala ».
1937. Grazia Deledda, na «Cosima ».
1936. Ernestina de Champourcín, yana «Na-abaghị uru song ».
1935. Nancy Mitford, ya naỌgụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Chọpụta nwanyị edemede nke bipụtara n'afọ a mụrụ gị
Na-akọwapụta Oscar Wilde, William Shakespeare, Leon Tolstoi, ...